Funzionare - Italiaans - Burmees Vertaling en Voorbeelden
Je was op zoek naar: funzionare (Italiaans - Burmees)
I discendenti di questa directory avranno7directory superiori. Il programma può creare un'immagine di una tale gerarchia di fileemasterizzarla, ma il disco potrebbe non essere letto da tutti i sistemi operativi. Nota: una tale gerarchia di file è nota funzionare con Linux.
The children of this directory will have7parent directories. Brasero can create an image of suchafile hierarchy and burn it but the disc may not be readable on all operating systems. Note: Suchafile hierarchy is known to work on Linux.
Per questo dunque dovete pagare i tributi, perché quelli che sono deditiaquesto compito sono funzionari di Dio
ထိုအကြောင်းကြောင့် အခွန်အတုတ်ကို ပေးကြလော့။ မင်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ အမှုစောင့်ဖြစ်၍၊ အမှုတော်ကို အမြဲထမ်းကြ၏။
Egli si alzòesi mise in cammino, quand'ecco un Etiope, un eunuco, funzionario di Candàce, regina di Etiopia, sovrintendenteatutti i suoi tesori, venuto per il cultoaGerusalemme
ထိုအခါ အဲသယောပိပြည်ကိုအစိုးရသော မိဖုရားကန္ဒက်ထံ၌ ဘုန်းကြီးသောအမတ်ဖြစ်၍၊ ဘဏ္ဍတော်ရှိသမျှကို အုပ်စိုးရသော အဲသယောပိ ပြည်သား တယောက်သည် ကိုးကွယ်ခြင်းငှါ ယေရုရှလင် မြို့ သို့သွား၍၊
Andò dunque di nuovoaCana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re, che aveva un figlio malatoaCafarnao
ရေကိုစပျစ်ရည်ဖြစ်စေသောအရပ်၊ ဂါလိလဲပြည်ကာနမြို့သို့ တဖန်ကြွတော်မူ၏။ ကပေရနောင်မြို့၌ အမတ်တယောက်၏သားသည် အနာရောဂါစွဲလျက်ရှိ၏။
Ma il funzionario del re insistette: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia»
သခင်၊ အကျွန်ုပ်သားမသေမှီကြွတော်မူပါဟု အမတ်လျှောက်ပြန်၏။
Ma Daniele decise in cuor suo di non contaminarsi con le vivande del reecon il vino dei suoi banchettiechiese al capo dei funzionari di non farlo contaminare
ဒံယေလမူကား၊ ပွဲတော်မှကြွင်းသောအစာနှင့် သောက်တော်မူသော စပျစ်ရည်ကို မသောက်မစားဘဲ၊ ညစ်ညူးခြင်းကို ရှောင်မည်ဟု အကြံရှိ၍၊ မိမိကို မညစ်ညူး စေမည်အကြောင်း၊ မိန်းမစိုးအုပ်ကို အခွင့်တောင်း၏။
entrarono tutti i generali del re di Babiloniaesi stabilirono alla Porta di mezzo; Nergal-Sarèzer di Sin-Magir, Nebosar-Sechim, capo dei funzionari, Nergal-Sarèzer, comandante delle truppe di frontieraetutti gli altri capi del re di Babilonia
ရွှေထားဝန်နေရဂါလရှရေဇာ၊ မိန်းမစိုးအုပ်စာ သခိမ်၊ မာဂုပညာ ရှိအုပ်နေရဂါလရှရေဇာတည်းဟူသော ဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်၏မှူးမတ်အစရှိသော မှူးတော် မတ်တော်အပေါင်းတို့သည် မြို့ထဲသို့ဝင်၍၊ အလယ်ချက် တံခါးဝ၌ထိုင်ကြ၏။
Dalla città egli fece prigionieri un funzionario, che eraacapo dei soldati,esette uomini fra i più familiari del re, i quali furono trovati in città,el'aiutante del capo dell'esercito che arruolava la gente del paese,esessanta uomini della gente del paese, che furono trovati nella città
စစ်သူရဲတို့ကို အုပ်သောဗိုလ်တယောက်၊ မြို့ထဲ ၌တွေ့မိသော တိုင်ပင်မှူးမတ်ခုနှစ်ယောက်၊ ပြည်သူ ပြည်သားများကို နှိုးဆော်သော တပ်စာရေးကြီး တယောက်၊ မြို့ထဲ၌တွေ့မိသော ပြည်သားခြောက်ဆယ် တို့ကို မြို့ထဲကခေါ်သွား၍၊
però il capo dei funzionari di corte chiamò Daniele Baltazzàr; Anania Sadràch; Misaele MesàcheAzaria Abdènego
မိန်းမစိုးအုပ်သည် ထိုသူတို့ကို အမည်နာမလဲ၍၊ ဒံယေလကို ဗေလတရှာဇာ၊ ဟာနနိကိုရှာဒရက်၊ မိရှေလ ကိုမေရှက်၊ အာဇရိကို အဗေဒနေဂေါဟု၊ အသီးအသီး အမည်အသစ်ကို ပေး၏။
Godolia figlio di Achikàm, figlio di Safàn, giuròaloroeai loro uomini: «Non temete i funzionari caldei; rimanete nel paeseestate soggetti al re di Babiloniaevi troverete bene
ရှာဖန်၏သားဖြစ်သော အဟိကံ၏သား ဂေဒလိက၊ ခါလဒဲမင်း၏အမှုကို ဆောင်ရွက်ရမည် အခွင့်ကို မစိုးရိမ်ကြနှင့်။ ဤပြည်၌နေ၍ ဗာဗုလုန် ရှင်ဘုရင်အမှုကို ဆောင်ရွက်ကြလော့။ သို့ပြုလျှင်၊ ချမ်းသာရကြလိမ့်မည်။
Il re ordinò ad Asfenàz, capo dei suoi funzionari di corte, di condurgli giovani israeliti di stirpe reale o di famiglia nobile
ထိုအခါရှင်ဘုရင်သည် မိန်းမစိုးအုပ် အာရှ ပေနတ်ကို ခေါ်တော်မူ၍၊
Dio fece sì che Daniele incontrasse la benevolenzaela simpatia del capo dei funzionari
ဘုရားသခင်ပြုပြင်တော်မူသောအားဖြင့်၊ မိန်းမ စိုးအုပ်သည် ဒံယေလကို အလွန်ချစ်သနားသော်လည်း၊
Ma Daniele disse al custode, al quale il capo dei funzionari aveva affidato Daniele, Anania, MisaeleeAzaria
ထိုအခါ ဒံယေလ၊ ဟာနနိ၊ မိရှေလ၊ အာဇရိ တို့ကို ကြည့်ရှုစေခြင်းငှါ မိန်းမစိုးအုပ်ခန့်ထားသော စားတော်ကဲကို ဒံယေလက၊
Terminato il tempo stabilito dal re entro il quale i giovani dovevano essergli presentati, il capo dei funzionari li portòaNabucodònosor
နန်းတော်သို့ သွင်းစေခြင်းငှါ ချိန်းချက်တော်မူ သော အချိန်ရောက်သော်၊ မိန်းမစိုးအုပ်သည် လုလင်များ တို့ကို ခေါ်၍ နန်းတော်သို့ သွင်းလေ၏။
Essi allora - cioè Nabuzaradàn, capo delle guardie, Nabusazbàn capo dei funzionari, Nergal-Sarèzer, comandante delle truppe di frontieraetutti gli alti ufficiali del re di Babilonia
ကိုယ်ရံတော်မှူးနေဗုဇာရဒန်၊ မိန်းမစိုးအုပ် နေဗုရှာဇဗန်၊ မာဂုပညာရှိအုပ်နေရဂါလရှဓရဇာအစ ရှိသော ဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်၏မှူးမတ်အပေါင်းတို့သည် လူကိုစေလွှတ်၍၊
Il re interrogò la donna, che gli narrò il fatto. Il re l'affidòaun funzionario dicendo: «Restituiscile quanto le appartieneela rendita intera del campo, dal giorno del suo abbandono del paese fino ad ora»
ရှင်ဘုရင်သည် မိန်းမကိုမေး၍ မိန်းမလည်း သက်သေခံ၏။ ထိုအခါရှင်ဘုရင်က၊ သူ၏ဥစ္စာရှိသမျှကို ၎င်း၊ ပြည်တော်ကထွက်သော နေ့မှစ၍ ယခုတိုင်အောင် သူ့မြေ၌ ဖြစ်သမျှကို၎င်း ပြန်ပေးစေဟု မိန့်တော်မူလျက်၊ သူ၏အမှုကို စောင့်စေခြင်းငှါ အရာရှိ၏တယောက်ကို ခန့်ထားတော်မူ၏။
Dalla città egli prese un funzionario, che eraacapo dei guerrieri, cinque uomini fra gli intimi del re, che furono trovati in città, il segretario del capo dell'esercito, che arruolava il popolo del paese,esessanta uomini del popolo del paese, che si trovavano in città
စစ်သူရဲတို့ကိုအုပ်သော ဗိုလ်တယောက်၊ မြို့ထဲ ၌တွေ့မိသော တိုင်ပင်မှူးမတ်ငါးယောက်၊ ပြည်သူ ပြည်သားများကို နှိုးဆော်သော တပ်စာရေးကြီး တယောက်၊ မြို့ထဲ၌တွေ့မိသော ပြည်သားခြောက်ဆယ်တို့ ကိုမြို့ထဲကခေါ်သွား၍၊
Inoltre sobillarono contro di loro alcuni funzionari per mandar fallito il loro piano; ciò per tutto il tempo di Ciro re di Persia fino al regno di Dario re di Persia
ယုဒအမျိုးသားတို့၏ အကြံကိုဖျက်ဆီးခြင်းငှါ၊ ပေရသိရှင်ဘုရင် ကုရုလက်ထက်ကာလပတ်လုံးမှသည်၊ ပေရသိရှင်ဘုရင် ဒါရိလက်ထက်တိုင် အောင်၊ ရှေ့နေ တို့ကို ငှါး၍ထားကြ၏။
Copia della lettera che Tattènai, governatore dell'Oltrefiume, Setar-Boznaiei loro colleghi, funzionari dell'Oltrefiume, mandarono al re Dario
မြစ်အနောက်ဘက် မြို့ဝန်တာတနဲနှင့် ရှေသာ ဗောဇနဲမှစ၍ သူတို့အပေါင်းအဘော်၊
«Recum governatoreeSimsai scribaegli altri loro colleghi giudici, legati, sovrintendentiefunzionari, uomini di Uruk, di Babiloniaedi Susa, cioè di Elam
စာတိုက်စိုးရေဟုံ၊ မြို့စာရေးရှိမရှဲနှင့် အခြားသော အပေါင်းအဘော်၊ ဒိနဲပြည်သား၊ အဖာသသက်ပြည်သား၊ တာပေလပြည်သား၊ အဖာရသပြည်သား၊ အာခေဝပြည် သား၊ ဗာဗုလုန်ပြည်သား၊ ရှုရှနက်ပြည်သား၊ ဒေဟဝ ပြည်သား၊ ဧလံပြည်သား အစရှိသော၊
kasalungat ng barado (Tagalog>Engels)christus vincit (Latijn>Italiaans)noi abbiamo ricevuto (Italiaans>Engels)أسـود (Arabisch>Engels)kya aap mere se baat kar sakti ho (Hindi>Engels)ada wana wita (Sinhala>Engels)legare con la reggiatrice (Italiaans>Engels)day shift (Engels>Tagalog)street number (Engels>Spaans)májmegnagyobbodás (Hongaars>Italiaans)sorry me busy tha (Hindi>Engels)thank you for catching up with me (Engels>Xhosa)tu kay karte sadhya (Engels>Hindi)contoh ayat majmuk (Maleis>Chinees (Vereenvoudigd))first name middle name last name (Engels>Tagalog)nakusubiri kwa hamu (Swahili>Engels)agrafeuses (Frans>Spaans)wms (Engels>Spaans)źródeł (Lets>Italiaans)cope up meaning (Engels>Tagalog)attendant juste pour l (Frans>Engels)впевнившись (Oekraïens>Russisch)otak udang (Maleis>Chinees (Vereenvoudigd))abóbora moranga (Portugees>Engels)君はまだ負けてない (Pools>Perzisch)